New Star Soccer 4.16.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.16.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား New Star Soccer
New Star Soccer ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
** အခုတော့5သန်း 1 ကျော်စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း! **
"မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များအပေါ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးဂိမ်း။ " နယူးစတားဘောလုံးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် (Eurogamer) ။ အဆိုပါဘောလုံးဂိမ်း Mass en ကစားသမားများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစာနယ်ဇင်းများကချီးကျူးခြင်းနှင့် adored ။
သငျသညျနယူးစတားအားကစားပြိုင်ပွဲကနေသင်ဤ BAFTA ဆုရအတွက်ပျက်စီးလွယ် 16 နှစ်အရွယ်အဖြစ်သင့်ဘောလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုဖွင့်အဖြစ်ပြသ၏ကြယ်ပွင့်, App Store မှာ # 1 အားကစား RPG ဖြစ်ကြသည်။
"တစ်ဦးကယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ဂိမ်း" 5/5 (The Sun)
သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်, လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်သင်ဤကွီးစှာအားကစားကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားအဖြစ်အသက်တာ၏ roller-Coaster စီး!
(Kotaku) "sim နှင့် RPG အမြန်ကစားဖုန်းကိုဂိမ်း, ဘောလုံးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောလက်ထပ်ထိမ်းမြား" ။
သင်လမ်းတလျှောက်ပြဿနာများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပွေီးမှရင်ဆိုင်ရအဖြစ်နည်းပြ, သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်သင့်စပွန်ဆာပျော်ရွှင်အဖွဲ့-အိမ်ထောင်ဖက်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သင့်ဆက်ဆံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ၌သင်တို့၏ဝင်ငွေရရှိမှုအန္တာရာယ်ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့လာဘ်စူးစမ်းခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဂိမ်းရမှတ်သတ်မှတ်ထားဖို့အနားယူ!
မိနစ်အနည်းငယ်ဒါမှမဟုတ်အထူးကြပ်မတ်နာရီအနည်းငယ်များအတွက်ရေစာဂိမ်းအဖြစ်အညီအမျှပျော်စရာ, နယူးစတားဘောလုံးစိတ်ထဲတွင်သဘောကျနှင့်ပိုပြီးအဘို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်, ဧည့်ခံကိုသင်ချန်ထားမည်, ထိုသို့မဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
4.7 /5ပျမ်းမျှ 30000 ကျော်အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း !!
"နယူးစတားဘောလုံးအစဉ်အဆက်အများဆုံးစွဲလမ်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်" ။ (တနင်္ဂနွေကြေးမုံ)
ထိန်းချုပ်မှု, အသေးစိတ်နှင့်အတူဧည်, ဖျော်ဖြေရေး, Mini-ဂိမ်းများ, လှုပ်ခြင်း, အံ့သြဖွယ်များနှင့်သက်သက်စစ်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်အလိုလိုနယူးစတားဘောလုံးက start ကနေ finish ကိုတစ်နှစ်သက်တော်မူ၏။
5/5 (တနင်္ဂနွေမ်) "ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဘက်ထရီကွယ်လွန်သည်အထိသင်ကစားပါလိမ့်မယ် engrossing"
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ဤသည်ကြီးမားသော, အသေးစိတ်ဘောလုံးကွဝဠာကိုပိုင်ဆိုင်ရင်းသင့်သည်။ သင်တန်းမြေပြင်နှင့်သင်၏ပထမဆုံးစာချုပ်ဝင်ငွေ ...
ခေတ်သစ်ဘောလုံးကွဝဠာစူပါစွဲလမ်း, စိတ်လှုပ်ရှားစရာခြင်း simulation!
သင့်ရဲ့ ALTER အတ္တ Create နှင့်နိုင်ငံတကာဘုန်းအသရေမှအသင်းကြီးအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းစေ!
, အေးဂျင့်များငှားရမ်းသင်တန်းဆရာအသစ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ယူ, သင့်အခွက်တဆယ်ဖွံ့ဖြိုး!
အဆိုပါလောင်းကစားရုံပျော်မွေ့, ကိုယ်ပိုင်ပြိုင်ပွဲ-မြင်းများနှင့်ပိုပြီးမှတပါး - ဒါပေမယ့်ချိုမြိန်သူဌေးကဆက်ကြိုးစားပါ!
★ Eurogamer - နေ့၏ App ကို - "မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များအပေါ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးဂိမ်း။ "
The Sun ★ - တစ်နှစ်တာ၏ App ကို - "။ တစ်ဦးကယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ဂိမ်း" 5/5
★ PocketGamer - ရွှေဆုချီးမြှင့် - "သင့်မျက်နှာအနှံ့မှမျးမံတဲ့စစ်မှန်တဲ့စှဲလမျးသူများ၏သှားပွီး။ ပွုံးနှင့်အတူ၎င်း၏ရိုးရှင်းစွာတင်ဆက်ပွဲ၏မြင့်နှင့်စိတ်ဓာတ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ "
★ Kotaku - နေ့၏ App ကို - "။ quickplay ဖုန်းကိုဂိမ်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအိမ်ထောင်ရေး, ဘောလုံးစီမံခန့်ခွဲမှု sim နှင့် RPG"
★ Gametrailers - နေ့၏ App ကို - "ဒါဟာတစ်ဦးမရှိမဖြစ်ဒေါင်းလုပ်ပါပဲ။ "
★ MSN ကို - နေ့၏ App ကို - "နယူးစတားဘောလုံးမိမိတို့၏ဖုန်းများချမထားနိုင်သူကစားသမားများအနေဖြင့်ဧဝံဂေလိစကားလုံး-of ပါးစပ်ဘက်ဇ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ " 5/5
★ Sunday Times ၏ - "ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဘက်ထရီကွယ်လွန်သည်အထိသင်ကစားပါလိမ့်မယ် engrossing ။ " 5/5
★ကြေးနန်း - "ဒါဟာအံ့သြစရာနည်းနည်းဂိမ်းရဲ့ဒါပေမယ့်သင့်အသက်တာကိုစားလိမ့်မည်။ " 4.5 / 5
★ Modojo - "သင်သည်အစဉ်အသင့်မိုဘိုင်းပေါ်မှာကစားမယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးဂိမ်း။ " 4.5 / 5
★ AllAboutTheGames - "ငါက New စတားဘောလုံးကစားခြင်းတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုရက်သတ္တပတ်ကုန်ပါဘူး။ " 5/5
★နင်္ဂနွေနေ့ကြေးမုံ - "နယူးစတားဘောလုံးအစဉ်အဆက်အများဆုံးစွဲလမ်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ "
★ Edge - "ရှိမုနျကိုဖတျပါရဲ့ဖန်တီးမှုပေါ် မူတည်. အဆိုပါအရင်းရှင်စနစ်, ထို artistry နှင့်၎င်း၏ဘာသာရပ်၏သက်သက်, ဘုနျးကွီးသောခန့်မှန်းရခက်ဖမ်းယူ။ " 7/10
★ PCAdvisor - "ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်စရာ။ " 4.5 / 5
★ GodIsAGeek - "ဒါဟာတကယ်ကို Over-ခန့်မှန်းနယူးစတားဘောလုံးဘယ်လောက်တောက်ပမဖြစ်နိုင်ပါ။ " 10/10
★ MacWorld - အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု - "နယူးစတားဘောလုံးစုံလင်သောမိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ရည်ရွယ်ထားနှင့်မစိုက်ထိပ်ထောင့်တာမျိုး။ " 5/5
New Star Soccer အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
New Star Soccer အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
New Star Soccer အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
New Star Soccer အား အခ်က္ျပပါ
apkgiochi33 စတိုး 82 87.54k
New Star Soccer ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း New Star Soccer အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.16.3
ထုတ်လုပ်သူ Thumbstar Games Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.newstargames.com/content/text/privacy/Privacy
App Name: New Star Soccer
Release date: 2019-08-14 07:32:41
လက်မှတ် SHA1: EB:94:AF:17:F8:33:5F:C6:2C:FF:5A:19:51:79:46:C3:DB:DC:AE:A8
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Simon Read
အဖွဲ့အစည်း (O): New Star Games
နယ်မြေ (L): Bicester
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Oxford
New Star Soccer APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ